China nnukwu-ọnụ ọgụgụ ngwá ụlọ woodworking pụrụ iche ekara sanding igwe emepụta na suppliers |Igwe Tenglong
Aha ngwaahịa:Igwe aja aja nwere akpụ akpụ
Eji ngwaahịa:otutu nkọwa osisi, wdg.
Akara ngwaahịa:Igwe Tenglong
Adreesị ngwaahịa:Bali Metal Electromechanical Industrial Park, Suining County, Xuzhou
Igwe nchara nke nwere ụdị pụrụ iche bụ nke sisal na-egweri wheel na wheel egweri, otu igwe, otu igwe nwere rollers abụọ, ụzọ abụọ na-aga n'ihu na ntụgharị ntụgharị.Ọ adopts multi-gradient egweri wheel nha profaịlụ, jikọtara ya na electric ebuli ịchịkwa elu nke roller otu, n'ihi na irè egweri nke mpempe akwụkwọ n'elu-egwe ọka ma ọ bụ ihe osise dị mfe grooves, wdg, mfe iji rụọ ọrụ, Nchikota nke abụọ nwere ike egweri mgbagwoju anya. na efere dị larịị nwere ụdị pụrụ iche n'otu oge, na-arụpụta ihe ka mma.
The pụrụ iche ekara sanding igwe nwere nnwere onwe na-ebuli Ọdịdị na ugboro ntughari ọsọ njikwa, nke na-adaba adaba maka nrụgide njikwa na sanding ọsọ nke ọ bụla sanding m usoro, na ike izute sanding chọrọ nke dị iche iche usoro ngwaahịa.Igwe sanding nwere ụdị pụrụ iche bụ otu n'ime akụrụngwa mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ arịa ụlọ, yana arụmọrụ ya na ịdịmma ọrụ ya na-emetụta mmepụta nke ụlọ ọrụ arịa ụlọ.
1. Igwe sanding pụrụ iche na-adabara ụdị mbadamba osisi siri ike, mbadamba ihe mejupụtara, mbadamba njupụta, primers, ahịhịa ahịhịa, ma ọ bụ elu mgbe niile, elu nke nwere ọdịdị pụrụ iche na elu gbagọrọ agbagọ, ọ nwere ike ịdị ike. na finely polished, na osisi elu nwere ịrịba sanding mmetụta.
2. Aja diski na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu, nke a na-edozi nke ọma na-eme ka diski na-egweri kwụ ọtọ, iji gbochie ihe omume nke oghere ndị na-efu efu, ma na-ejikọta ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka ọ dị mfe iji dochie ájá ájá.
3. The longitudinal egweri roller adopts ụkpụrụ nke centrifugal ije, ọ na-ewe a obere polishing na deburring oge, arụmọrụ na-abawanye site ihe karịrị 6 ugboro, na-azọpụta ọrụ na oge.
4. A na-eji igwe na-emepụta ihe na-emepụta ihe pụrụ iche nke na-eme ka ọ dị elu na-agbanwe ngwa ngwa na-achịkwa ngwa ngwa, nke nwere ike ịhazigharị ọsọ kwesịrị ekwesị dị ka efere dị iche iche iji hụ na arụmọrụ nke ọrụ na mmetụta nke sanding.
5. Gbaa mbọ hụ na nkwụsi ike na ndụ ọrụ nke igwe sanding.
6. Igwe sanding nke nwere ụdị pụrụ iche nwere ike ime mgbanwe, nke nwere ike imezi akụkụ ziri ezi nke ọrụ ahụ na nhụsianya elu nke workpiece.
7. The udi sanding igwe nwere ike hazie workpieces na nnukwu obosara, yana warara workpieces.
8. The udi sanding igwe nwere ike hazie ụdị ọ bụla nke larịị na-ebupụta, nakwa dị ka ụdị ọ bụla curved elu.
9. Enwere ike iji igwe sanding pụrụ iche na-emepụta ihe dị ukwuu yana mmepụta obere ihe.
10. Igwe nchacha pụrụ iche na-eme ka ọkpụkpụ kọntaktị nke isi ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mma, na-achọpụta nhazi nhazi akpaaka nke usoro nsị.
Nke gara aga: Igwe eserese waya 620-6 zuru oke akpaka
Osote: Igwe Sander na-ekpochapụ maka osisi
Igwe na-eji ahịhịa ahịhịa ahịhịa maka elu gbara agba
igwe aja aja
igwe polishing osisi